Zava-bita - Torolàlana WoW | WoW Guides (Pejy 2)
Fanasana any an-danitra - Ady amin'ny biby
Torolàlana feno amin'ny ady amin'ny fanasana any an-danitra amin'ny Algalon the Observer. Paikady ady sy biby fiompy takiana.
Leash Bands IV - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Torolàlana hahazoana ny zava-bita Raid amin'ny Leash IV: Ny fianjeran'ny mpanjaka ... Squirrel! Fomba ahazoana ny biby fiompy sy ny lehibena manome azy ireo.
Leash Bands III - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Bands amin'ny Leash Achievement Guide III: misotro amin'ny Sunwell Plateau. Ny sefo sy ny biby fiompy rehetra dia mila mahazo an'ity zava-bita ity.
Leash Bands II - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Tarika amin'ny tari-dalana mahomby amin'ny Leash II: Harmonisation. Ahoana ary aiza no ahazoana ny biby fiompy hahazoana an'ity World of Warcraft zava-bita ity.
Leash Bands I - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Toro-làlana ahatongavana amin'ny tarika voahosotra I. Ahoana ny fomba hahazoana ireo biby fiompy roa ambin'ny folo. Aiza amin'ireo tarika ireo no hahitana azy ireo ary iza ireo sefo hanome azy ireo ho antsika.
Super-Eminent Insane - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Torolàlana momba ny fomba hahatratrarana ny zava-bita sy ny tanjaky ny mahery indrindra Insane amin'ny lalao World of Warcraft. Reputations ilaina amin'ny fanatanterahana.
Fiovana lehibe amin'ny zava-bita sy ny maody any Ulduar
Ao amin'ny patch 7.3.5 ho avy, ny fanafihana Ulduar dia hiatrika fanovana maro amin'ny zava-bitany sy ny maody rehetra handraisana ny Timewalking: Ulduar.
Ny famaritana tsy masina dia hesorina ao amin'ny Patch 7.2.5
Ny zava-bita tsy voafaritra tsy voafehy, mifandraika amin'ny rojo Death Knights Class Mount, dia hesorin'i Patch 7.2.5.
Fampisehoana Ratsy Karallejera any Karazhan - Ahoana no fomba ahazoana azy
Androany izahay dia manome torolàlana video mampiseho ny fomba hahazoana ny Karallejera Rat Achievement ao amin'ny tranomaizina Karazhan.
Anio dia asehonay anao ny fomba hisamborana ity biby fiompy miafina mahafatifaty ao Dalaran the Dust Rabbit, ampahany amin'ny zava-bitan'ny biby fiompy ao amin'ny Nosy Broken Island.
Ahoana ny fomba hahatratrarana ny Fianarana avy amin'ny zava-bita tsara indrindra? Ny fampiakarana ny lazanao miaraka amin'i Nat Pagle mankany amin'ny Best Friend dia fanontaniana tsotra izay manampy anao hamaha.
Hetsika alohan'ny patch Legion: Ankehitriny dia manome saina ny zava-drehetra
Vondrona mpikomy maromaro antsoina hoe Mpikabary ny lahatra no mieritreritra fa tsy afaka miady amin'ny Legiona isika. Andao aloha handeha fa misy dikany daholo izany ary hanome tsiny azy ireo!
Amin'ity toro-lalana ity dia hiezaka aho hanazava ny dingana arahinao hahatratrarana ny zava-bitan'ny The Best Fisherman.
Manidina amin'ny legiona - dingana voalohany mankany amin'ny zava-bita
Ny fahafahantsika manidina amin'ny legiona dia zavatra mampiahiahy mpilalao maro, mbola tsy fantatsika hoe rahoviana no hisy ny zava-bita, saingy fantatsika ny dingana voalohany tokony harahina.
Ahoana no fomba ahazoana an'i Lady Liadrin sy Pegasus?
Torolàlana kely izay ampahafantarinay anao ny fomba hamohana an'i Lady Liadrin sy Pegasus, valisoa amin'ny lalao Hearthstone sy Warcraft.
Hitako i Pepe! Niverina izy! Ary amin'ny endrika zava-bita!
Nahita Pepe !, ny zava-bita andrasana indrindra amin'ny patch 6.2.2. Atorinay anao ireo toerana hahitana an'i Pepe ary hahatratrarana an'io zava-bita io
Inona no miafina any Tanana? Xemirkol, ny sangany amin'ny aloka
Torolàlana hahitana ireo sangany miafina ao amin'ny Tanaan Jungle, Xemirkol, ary ahazoana ny fahombiazan'ny tanjaka miaraka amin'ny titre Predator
Torolàlana amin'ny fanatanterahana ny zava-bita tanjaka Eternal Sands Tracker miaraka amin'ny tendron'ny Gray Riding Camel ao amin'ny faritr'i Uldum.
Torolàlana miaraka amin'ny sari-tany mba hahitanao sy hametrahana ireo sangany rehetra ao amin'ny faritry ny Nosy Manokana
Torolàlana ho an'ny lohateny: Photographer an-tsaha
Torolàlana ho an'ny zava-bita sy lohatenin'ny mpaka sary Warlords of Draenor Field miaraka amin'ny fakantsary fakantsary Camera SELFI Mk. II
Torolàlana ho an'ny fitaovam-piadiana Legendary: Quel'delar
Fahatezeran'ilay torolàlana King Lich hahazoana ny fitaovam-piadiana malaza Quel'delar.
Voninahitry ny Hero: Mandehana mankany amin'ny Red Proto-Drake!
Amin'ity toro-lalana ity dia hasehoko anao ny fomba fanatanterahana ny zava-bita WOTLK Ny voninahitry ny maherifo, miaraka amin'ny tendrombohitra mifandraika amin'izany.
Ny Voninahitry ny Raideran'ahitra: Ahoana no hanaovana azy nefa tsy manandrana maty.
Amin'ity torolàlana ity dia hasehonay anao ny fomba fanatanterahana ny zava-bita icc The Glory of the Icecrown Raider, miaraka amin'ny tendrombohitra mitovy aminy.
Patch 6.2.2: biby fiompy, kilalao ary zava-bita vaovao!
Ilay patch 6.2.2 vaovao dia mitondra biby fiompy sy kilalao vaovao miambina antsika elites mampatahotra. Atorinay anao hoe aiza izy ireo.
Mandehana mankany amin'ny Master Cultur! Miaraka amin'ny addon Loremaster
Amin'ity torolàlana ity dia hodinihintsika amin'ny antsipirihany ny addon Loremaster hanamorana ny fivoaran'ny zava-bitan'ny Master Cultural ary amin'izany dia hahazo lohateny sy tabard.
Toro-lalana sy lohatenin'ny angano: Lord Beetle and the Black Qiraji
Torolàlana fahombiazana taloha amin'ny vanila mba hahazoana ny lohateny Scarab an'ny Tompo sy ny Tendrombohitr'i Qiraji Mainty
Legendary Ring Final Mission - Lahatsary - Spoiler
Ho hitantsika ny sarin'ny Misiona Farany an'ny peratra angano ao anaty horonan-tsary iray navoakan'i Ananyx. Fifantohana amin'ny spoiler.
Torolàlana hampiakarana ny lazan'ilay ankolafy The Hermits of Pandaria ary hahazo izany ny Disc of the Red Flying Cloud, miaraka amin'ny zava-bitany tsirairay avy.
Gold Bloodmaul Mines - torolàlana momba ny fomba sarotra amin'ny volamena
Torolàlana ho an'ny tranomaizina Bloodmaul Mines ao anaty fomba fanamby hahazoana ny zava-bita Gold Bloodmaul Mines. Ahitana horonan-tsary momba ny fanamby.
Volomparasy mandrakizay - mpitari-dalana modely fanamby
Torolàlana handresena ny trano-maizina The Eternal Garden amin'ny maodely fanamby miaraka amin'ny fanonona volamena ary hahazoana ny zava-bita The Eternal Garden Gold. Ahitana horonan-tsary momba ny fanamby.
Auchindoun Gold - Torolàlana ho an'ny Mode Gold Challenge
Torolàlana handresena ny tranomaizina Auchindoun amin'ny maody fanaovana fanamby miaraka amin'ny fanonona volamena sy hahazoana ny zava-bita volamena Auchindoun. Ahitana horonan-tsary momba ny fanamby.
Manidina ao Draenor - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Izahay dia mitondra ny mpitari-dalana izay hanampy anao hahazo Fly in Draenor, mitanisa ireo zava-bita ilaina izahay sy ny fomba hampiakarana ireo laza telo vaovao.
Torolàlana ho an'ny Meta: Voninahitry ny Ulduar Raider
Androany izahay dia mitondra torolàlana ho an'ny zava-bita: Voninahitry ny Ulduar Raider
Ity no Torolàlana ho an'ny zava-bita
Mirary fety sambatra ho an'ny rehetra! Eny, Krismasy indray izao. Antony lehibe iray hafa hiakanjo tsara, hahatsapa ho tsara ary ho sambatra. Amin'ity herinandro ity isika dia manana fironana farany amin'ny lamaody: akanjo amin'ny ririnina! Mahagaga
Torolàlana amin'ny zava-bita: tiako ny dian'ny aloka, afo ary ranomandry
Androany isika dia hanao dihy! Iza no mbola tsy zaza ary nilalao hazandrano, mosara avy any aoriana sa toy izany? Amin'ity torolàlana ity dia hanampy anao izahay hanamarina raha misy afo, ranomandry ary l
Torolàlana ho an'ny zava-bita: ho an'ireo sifotra rehetra tiako (Cataclysm)
Torolàlana ho an'ny zava-bita: ankapobeny
Torolàlana ho an'ny zava-bita: momba ny takelaka rehetra
Torolàlana hanonganana ny antsantsa trozona
Ity torolàlana ity dia hanazava kely momba ny fifandonana amin'ity Shark goavambe sy mampatahotra ity, ireo toerana mety handalovany, ary raha resinao ilay antsantsa dia hahazo izao fahombiazana manaraka izao ianao
Torolàlana ho an'ny zava-bita - Voninahitry ny Mahery fo Cataclysm
Amin'izao fotoana izao misy olona manomboka mampita epics amin'ny fanafihana voalohany an'ny World of Warcraft: Cataclysm, fotoana tokony hametrahana herim-po (fa tsy teboka) ary hiroso amin'ny traikefa nahafinaritra
Torolàlana ho an'ny zava-bita: World Explorer
Rehefa manakaiky ny faran'ny fanitarana isika, tahaka ny misy antsika ankehitriny, dia manomboka manana fotoana sisa tavela amin'ny lalao eo anelanelan'ny fanafihana sy ny fanafihana isika. Ny sasany manararaotra mihanika fiovana, ny sasany miakatra pro
Torolàlana ho an'ny zava-bita: Screwdriver XA 002 - Mpanaintaina
Amin'ity toro-lalana ity dia hiresaka momba ny fomba famaranana ny XA-002 Screwdriver amin'ny maody mafy isika, izany hoe mamono ny fony alohan'ny hamonoana azy ary hahazoana ny zava-bita. Heartbreaker. Tsy hiresaka momba ny fomba famaranana ny Screwdriver isika satria noho izany dia manana izany isika mpitari-dalana hafa.
Ity zava-bita ity dia ao anatin'ny meta-prestasi Voninahitry ny Ulduar Raider izay ahazoantsika ny Rust Proto-Drake (amin'ny ara-dalàna) ary ny Ironbound Proto-Drake (amin'ny mahery fo).
Torolàlana ho an'ny zava-bita: Olona ambony tampoka
Amin'ity torolàlana ity hahatratrarana ny zava-bita Adala ambony tampoka Andao jerena ny ohatra iray amin'ny zava-bita sarotra indrindra azo. Raha mahomby isika dia ho antsika ny lohateny hoe "the Madman".
Niseho tamin'ny patch 3.1 teo akaikin'ny fivoahan'ny Ulduar izy io ary tena fanambin'ny faharetana sy ny faniriana izany.
Izy io dia misy ny fanatrarana ny lazan'ny fisandratana miaraka amin'ireo ankolafy "tsy fahita firy" indrindra amin'ny lalao, noho izany, sambatra ianao ireo olona adala nanolo-tena hanangana laza ireto, izao dia valisoa amam-boninahitra mifanentana aminao toy ny fonon-tànana.
Ho an'ireo izay mbola tsy nampakatra azy ireo fa mahatsapa tena manao izany, ity ny torolàlana ho an'ity zava-bita very saina ity.
Torolàlana ho an'ny zava-bita: Fivoriambe vy - Misafidy anao aho: Mpanamboatra vy
Torolàlana ho an'ny zava-bita: Kologarn - tsy mitondra fitaovam-piadiana
Torolàlana ho an'ny zava-bita tsy mitam-piadiana Kologarn, ampahan'ny voninahitr'i Raider
Zava-bita: mpamafa ahy
Voalohany indrindra dia mampahafantatra ny tenako aho, izaho dia Skozz (Los Errantes) mpikambana ao amin'ny For Heros, ary izaho dia mpiara-miasa vaovao amin'i Guias ...
Torolàlana ho an'ny zava-bita: Lalao kely
Torolàlana amin'ny zava-bita: fihazana lalao kely, toerana hahitana biby fiompy rehetra
Torolàlana ho an'ny zava-bita: Sambatra ora iray any ho any
Torolàlana ho an'ny zava-bita: Sambatra ora iray any ho any.
Torolàlana ho an'ny zava-bita: Ireo namanao Vermin
Torolàlana manokana momba ny zava-bita miaraka amin'ny zava-bita dimy verima tao anatin'ny iray.
Torolàlana ho an'ny zava-bita: fahalalana ambony
Torolàlana ho an'ny zava-bita: Scholar
Torolàlana ho an'ny zava-bita